တစ်ခုခုလုပ်တော့မယ်ဆို အမြဲစိုးရိမ်စိတ်ဝင်တတ်တဲ့ ကျွန်မ ခရီးစဉ်အတွက် အစီအစဉ်တွေကို ကြိုတင်ချမှတ်နေမိတယ်။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ပဲ ဦးဆောင်ပြီး ဘယ်သူက ဘာလုပ်ဆိုတဲ့ တာဝန်တွေကို ခွဲဝေပေးလိုက်တယ်။ ခရီးစဉ်ကို လူများများနဲ့ အဆင်ပြေပြေထွက်ဖြစ်အောင်လည်း ကျိတ်ဆုတောင်းလိုက်မိသေးတယ်။ ဆင်တူအက်ျီတွေနဲ့ ခရီးသွားရမယ့် အဖြစ်ကိုလည်း စိတ်ကူးတွေ ဖမ်းယဉ်လိုက်သေးတယ်။ သရေခေတ္တရာ…. ပြည် မြို့နားမှာ ရှိတယ်ဆိုတာကလွဲလို့၊ ပန်ထွာဘုရင်မနဲ့ ဒွတ္တဘောင်းမင်းကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ ကျွန်မ ဘာမှ မသိခဲ့ဘူး။ သာသနာ စတင်ထွန်းကားရာနေရာ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ နိဒါန်းချီတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ခပ်သဲ့သဲ့တော့ ပြောသံကြားဖူးပါသေးရဲ့။ ဒီမြေကို ကျွန်မ တစ်ကယ်သွားရတော့မယ်။ နောက်ထပ်ရှေးဟောင်းမြို့တစ်ခုဆီ ကျွန်မ ရောက်ဖြစ်တော့မယ်။ သရေခေတ္တရာရေ… ကြိုလင့်ပါတော့ကွယ်။
“ဟ ဟ ကားသေးတယ်ဟ Organizer တွေ ရပ်စီး.. အနော်တို့တွေ ထိုင်စီးမယ်”
ကျွန်မလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အသားဖြူဖြူနဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်။ မီတင်မှာတော့ တစ်ခါဆုံဖူးပေမယ့် မရင်းနှီးပါဘူး။ အခုအချိန်မှာတော့ ပြောမနာဆိုမနာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီပေါ့လေ။ သူ့နာမည်က ဖိုးဂျယ်လို့ ဘလောဂ့်ဂါ ညီမလေး နန်းညီက မိတ်ဆက်ပေးဖူးတာ သတိရသေးတယ်။ သူတို့နဲ့အတူ တစ်ခြား ကျွန်မ မသိတဲ့သူတွေလည်း ပါသေးတယ်။ နောက်ကျတော့မှ သိရတာက သူတို့တွေက မြောင်း၊ အိဖူး၊ မြတ်နိုး၊ အန်ဒီ တို့တွေတဲ့။ သြော် အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကြားဖူးနေကျ နာမည်တွေကိုး။
“တပည့်တော်မရဲ့ ဘ၀မှာ အချစ်ရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဘယ်အရေးကိစ္စမှာမဆို မသမာသူများ၊ အလွဲသုံးစား လုပ်တတ်သော လူလိမ်များနဲ့ မတွေ့ရပါလို၏ အရှင်ဘုရား”
ရွှေဆံတော်ရဲ့ ထီးတော်ပေါ်မှာ ခေါင်းလောင်းလေးတွေ တစ်ချွင်ချွင်မြည်နေကြတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ မနက်ခင်းလေကို ကျွန်မတို့တွေ အားရပါးရ ရှုရှိုက်ကြတယ်။ ဘုရားဂေါပက အဖွဲ့က စီစဉ်ပေးတဲ့ မနက်စာကို စားဖို့ စောင့်နေတုန်း ကျွန်မတို့ အဖွဲ့လိုက်၊ တစ်ယောက်ချင်းအလိုက် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။ အချင်းချင်း စလိုက်နောက်လိုက်နဲ့ အဲ့ဒီအချိန်ခဏမှာ အားလုံးဟာ အပူအပင်တွေနဲ့ ကင်းဝေးနေကြတယ်။ ခဏနေတော့ မနက်စာစားကြတယ်။ ဘုရားဂေါပကအဖွဲ့က အငြိမ်းစား ပါမောက္ခ ဦးမြ၀င်းက ရွှေဆံတော် ဘုရားသမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြတယ်။ စာရွက်လေးတွေဝေတယ်။ သုံးနှစ်မှာ တစ်ကြိမ် အစည်ကားဆုံး မြို့တွင်းမှာ လှည့်လည် ကျင်းပမယ့် ရွှေဆံတော် ဘုရားပွဲကိုလည်း လာခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ပြန်တယ်။ ဘုရားမှာ ရှိတဲ့ ထူးခြားတဲ့ နေရာတွေနဲ့အတူ အဘဘိုးဘိုးအောင်စတင် အဓိဌာန်အောင်ခဲ့တဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂန္ဒာရီ ခရီးကို လျှောက်တဲ့သူတွေ မဖြစ်မနေ လာရောက် အေင်မြေနင်းသင့်တဲ့အကြောင်းလည်း ပြောတယ်။ နောက်လည်း ဘုရားသမိုင်းကြောင်းတွေကို အတော်စုံစုံလင်လင်ရှင်းပြတာ ကျွန်မတို့ ဗဟုသုတ အတော်လေး ရခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်တော့ ကျွန်မတို့တွေလည်း ဘုရားကို လှည့်ပတ်ဖူးရင်း ပြန်ဆင်းကြတယ်။ ဘုရားခြေရင်းမှာရှိတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ခဏနားတော့မှ သတိထားမိတာက ပြည်ဟာ အတော်လေးကိုပူတဲ့ ရာသီဥတု ဒဏ်ကို ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ ဖြစ်တယ်။ အားလုံးရဲ့ မျက်နှာမှာလည်း မနက်ခင်းမှာ ချွေးစိုနေတာကို သတိပြုမိတယ်။
သရေခေတ္တရာမြို့ဟောင်းကို ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ဘောဘောကြီး ဘုရားကို ကျွန်မတို့ စတင်ဖူးတွေ့ရတယ်။ ကျွန်မတို့ မြင်ဖူးနေကျမဟုတ်တဲ့ ပုံသဏ္ဍန်နဲ့တည်ထားတဲ့ ဘောဘောကြီးဘုရားဟာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ရှေးအကျဆုံး ဘုရားတွေထဲက တစ်ဆူဖြစ်တယ်။ ပစ္စယံနိမ့်နိမ့်ပေါ်မှာ အထက်သို့ တဖြည်းဖြည်းစုချွန်သွားတဲ့ စေတီလုံးဖြစ်ပြီး စေတီထိပ် အချွန်ပေါ်တွင် ထီးတော်တင်ထားတာဟာ ရှေးမူမပျက်ပဲ ရှိနေပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ထဲက ယောင်္ကျားလေးတွေကတော့ အထက်ပစ္စယံထိတက်လို့ရတယ်။ မိန်းကလေးတွေကတော့ တက်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့။ ယောက်ျားလေးတွေ အကုန်အပေါ်တက်၊ မ်ိန်းကလေးတွေ အကုန် အောက်ကနေ သူတို့တွေကို အားကျ မနာလိုဖြစ်စွာ မော့ကြည့်ရင် အပြန်အလှန် ဓါတ်ပုံတွေ ရိုက်ယူခဲ့ကြသေးတယ်။ ကျွန်မ မျှော်လင့်ထားခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်း အဆောက်အဦးတွေကိုတော့ များများစားစား မတွေ့ရဘူး။ ခေတ်ကာလ ကြာညောင်းပြီးဆိုတော့ ပျက်စီးကုန်ပြီ ထင်ပါရဲ့။ ကျွန်မရင်ထဲမှာတော့ လွမ်းငွေ့တွေ ဝေနေဆဲ။ ဘောဘောကြီးဘုရားပြီးတော့ ဘဲဘဲလေးဘုရား၊ လေးမျက်နှာဘုရားနဲ့ ဗိသနိုးသင်္ချိုင်းရှိရာသို့ နေပူကျဲတောက်မှာ ခြေလျင် လျှောက်သွားရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ အားလုံးဟာ ဗိုက်အရမ်းဆာပြီး အရမ်းလည်း နုံးနေကြပြီး။ ဒါပေမယ့် ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေကို လေ့လာချင်ဇောနဲ့ ခြေလျင်ခရီးဆက်ကြတယ်။ လမ်းပေါ်မှာလည်း ပြောလိုက် ဆိုလိုက် နောက်လိုက် ပြောင်လိုက် နဲ့ပေါ့။
“ဘောဘောကြီး ဘုရားလို့ ဘာလို့ ခေါ်တာလည်း မသိဘူးနော်”
ရွှေနတ်တောင် ပန်ဝန်းကျင်ဟာ သိပ်လှတယ်။ လေပြည်သွေးသွေးက ကျွန်မတို့ရဲ့ ပင်ပန်းမှုတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တယ်။ ဘုရားပေါ်တက်ကြတော့ အပေါ်ကနေစီးမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင်း အားလုံး မှင်သက်သွားမိကြတယ်။
“Oh.. Breath Taking”
ကျွန်မတို့တွေ အော်ဟစ်ကြ၊ ခုန်ပေါက်ကြ၊ သီချင်းတွေ အပြိုင်ဆိုကြနဲ့ ရေပြာကို ရောက်တော့မှပဲ ရပ်လိုက်ကြတော့တယ်။ ရေပြာရောက်တော့ လက်ဆောင်လေးတွေ လဲကြတယ်။ လူတိုင်းမှာ လက်ဆောင် ပါမလာတဲ့အတွက် ပါလာတာတွေကိုပဲ မဲဖောက်ပေးကြရတယ်။ တစ်ချို့တွေအဲ့မှာ ရေချိုးကြတယ်။ တစ်ချိူ့တွေ ရေမချိုးပဲ ဆက်ဆော့ကြတယ်။ အဲ့မှာ အဖွဲ့ နှစ်ခု ထပ်ကွဲပြန်တယ်။ သန့်ရှင်း ဘလောဂ့်ဂါနဲ့ ရေမချိုးသော တည်မြဲဘလောဂ့်ဂါပေါ့။ ဘာဖြစ်လဲ ကျွန်မကတော့ ရေမချိုးတဲ့ တည်မြဲဘလောဂ့်ဂါ အဖွဲ့ကို ၀င်လိုက်တယ်။ အရမ်းကို ပူလောင် အိုက်စပ် နေပေမယ့် ရေချိုးပြီးရင် အင်္ကျီလဲရမှ ကျေနပ်တတ်တဲ့ကျွန်မ တမင်ကို ရေမချိုးပဲ နေခဲ့တာပါ။
ရေပြာစားသောက်ဆိုင်နောက်မှာ လယ်ကွင်းတွေရှိတယ်။ စပါးပင်တွေနဲ့ အရမ်းကိုလှတယ်။ အဲ့မှာ ဓါတ်ပုံတွေ သွားရိုက်ကြသေးတယ်။ တစ်ချို့တွေက မေးကြတယ် နင်တို့တွေ ကင်မရာ ဘယ်နှစ်လုံးလောက်ပါလဲတဲ့။ အမလေး လူ လေးဆယ့်တစ်ယောက်မှာ အနည်းဆုံးတော့ အလုံး သုံးဆယ်လောက်ကို ပါမှာလို့။ ကင်မရာမီးတွေ ပွင့်တာများ သေနပ်ပစ်တာ ကျနေတာပါပဲ။ ရေပြာမှာပဲ ညစာစားပြီး ကျွန်မတို့တွေ ပြည်မြို့က ပြန်ခဲ့တယ်။
တေလေ on September 5, 2009 at 7:35 am said:
lynnnayko on September 5, 2009 at 7:44 am said:
သရေခေတ္တရာ ကို ရောက်သွားသလို ပါပဲ…. 🙂
zawmyo on September 5, 2009 at 7:50 am said:
နေ့အိပ်မက် on September 5, 2009 at 8:32 am said:
ကျော်ညိုသွေး on September 5, 2009 at 10:38 am said:
နန်းညီ on September 7, 2009 at 4:31 am said:
ညလေး on September 5, 2009 at 11:02 am said:
ဟုတ်တယ် မယ်ပင့်ရေ.. ညလေးတော့ အဲ့ဒီ ပြည်အ၀င်က ဗိုလ်ချုပ် မြင်းစီးနေတဲ့ ရုပ်ထုကိုတွေ့တော့ ကြက်သီးတောင် ထမိတယ်။ တို့ရန်ကုန်က ကြေးရုပ်နဲ့များ ကွာပါ့။ ဖုန်မှုန့်တစ်စက်မရှိ။ တောက်ပြောင်နေတာ။ မြို့အ၀င်မှာ လာသမျှလူတွေကို စီးကြိုနေသလိုပဲ။ 😦
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် on September 6, 2009 at 1:40 am said:
cuttiepinkgold on September 6, 2009 at 4:32 am said:
နန်းညီ on September 7, 2009 at 4:30 am said:
အေးလေ အေးလေ.. 😛
နန်းညီ on September 7, 2009 at 4:29 am said:
အိမ် on September 6, 2009 at 11:37 am said:
တှောကီ on September 6, 2009 at 11:50 am said:
Mr.Pooh on September 6, 2009 at 12:21 pm said:
လူလိန် on September 6, 2009 at 1:33 pm said:
ကောင်းလိုက်တဲ့ ပို့စ်လေး 🙂 ထပ်သွားချင်စိတ်တောင်ပေါက်လာပြီ 🙂
Andy on September 7, 2009 at 3:49 am said:
ဒါနဲ့ ရေချိုးပြီး အင်္ကျီအဟောင်းပြန်ဝတ်တဲ့ အနော်တို့ကျ ဘယ်လိုပြောမလဲ။ 😛
cuttiepinkgold on September 7, 2009 at 3:54 am said:
ဂျူဝသန် on September 7, 2009 at 7:32 am said:
မီးလေး on September 8, 2009 at 11:32 am said:
မရေ မီးလေးလည်း လွမ်းနေဆဲပါပဲ… အထူးသဖြင့် စနေညနေဆို ငါတို့ဒီအချိန် ဘယ်မှာ ရောက်နေကြပြီ… ခုဆို ဘယ်နားမှာ ဆိုပြီးတော့ လွမ်းကောင်းတုန်းပဲ… 🙂
ဥဥ on September 9, 2009 at 7:50 am said:
ဥဥ on September 11, 2009 at 2:56 am said:
MyanmarDaily.net on September 11, 2009 at 4:41 pm said:
MyanmarDaily.net အလည်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗျာ။ စာဖတ်နေရင်း မျက်လုံးထဲမြင်ယောင် ၊ ကြားယောင်လာကာ ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါခဲ့ရသလိုခံစားမိပါတယ်ဗျာ ။ တကယ့်ကို စိတ်ဝင်စားစရာ ၊ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ ခရီးစဉ်ပါပဲ ။ ပြန်ဖောက်သည်ချ ပေးလို့ကျေးဇူး အထူးတင်ပါတယ်ဗျာ ။ 🙂
lapyae on September 13, 2009 at 9:11 am said:
YE LWIN OO on September 17, 2009 at 8:31 am said:
မောင် မိုးသည်း on September 20, 2009 at 4:12 am said:
Pablo (yo) on September 21, 2009 at 7:09 pm said:
နေ့အိပ်မက် on September 26, 2009 at 2:15 pm said:
kyaw swa tun on September 28, 2009 at 3:20 pm said:
လင်းကြယ်ဖြူ on October 8, 2009 at 9:55 pm said:
ှုIngjin Thant on November 7, 2009 at 9:44 am said:
ပင့်ဂိုလ်းရေ….အစ်မပြည်မှာမွေး၊ ပြည်မှာကြီးခဲ့တဲ့ ပြည်သူစစ်စစ်တောင် ပြည်အကြောင်းကို
baby on December 15, 2009 at 4:35 am said:
kyawzin on June 21, 2012 at 3:16 pm said:
mgmg on February 20, 2014 at 12:33 pm said: